Horudhac: Everton vs Chelsea… (The Blues oo xaqiijisay booskeeda afaraad ayaa galabta garoonka Goodison Park ku booqanaysa Everton) – Gool FM
(Liverpool) 07 Dis 2019. Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa u safreysa galabta garoonka Goodison Park halkaasoo ay kula soo ciyaari doono naadiga Everton, kaddib markii ay Blues xaqiijisay booskeeda afarta sare ee horyaalka markii ay 2-1 uga adkaaday Aston Villa.
Dhinaca kale kaddib markii ay Arbacadii guuldarro 5-2 ay kala kulantay Liverpool, kooxda Everton ayaa saldhigatay kaalimaha looga laabo horyaalka, waxaana ay markaa go’aansadeen inay iska cayriyaan macallinkoodii Marco Silva, waxaana bedelay hoggaamiyaha reer Portugal ee Duncan Ferguson kaasoo si ku meel gaar ah kooxda u sii wadi doona.
Taariikhda: Sabti, 05 Dis 2019
Dhaawacyada kooxda Everton ee booska khadka dhexe ayaa u muuqata mid ka sii dareysa, iyadoo Fabian Delph uu isna garoommada ka maqnaanayo kulankiisii shanaad isagoo qaba dhaawac bowdada ah.
Daafaca joogga dheer ee Yerry Mina ayaa isna shaki la galinayaa inuu kulankan ka soo muuqan doono kaddib dhaawac ku soo gaaray Arbacadii garoonka Anfield, halka Kabtan Seamus Coleman uu isna sii joogteyn doono maqnaanshihiisa.
Dhinaca kale Weeraryahanka kooxda Chelsea ee Tammy Abraham ayaa la filayaa inuu ka soo muuqdo kulankan inkastoo la bedelay ciyaartay ay ka horjeedeen Arbacadii naadiga Aston Villa.
Xiddiga qadka dhexe ee Chelsea, Ross Barkley ayaa ku soo laabanaya garoommada kaddib markii uu xanuunsaday.
>- Kooxda Everton ayaa ku guuleysatay kulankaan waxaana ay 2-0 ku adkaatay dabayaaqadii bishii Maarso, iyadoo haatan raadineysaa inay xaqiijiso guulo xiriir ah oo ay ka gaarto Chelsea markii ugu horreysay tan iyo bishii November sanadkii 1994-kii.
>- Chelsea ayaa ku guuldarreysatay inay gool dhaliso saddexdii kulan ee ugu dambeeyey horyaalka Premier League oo ay wajahday Everton, labo ka mid ah kulamadaas ayaa ku dhammaaday barbaro, halka midka kalena laga badiyey, weligii gool la’aan ma noqon afar kulan oo xiriir ah oo ay tartankan kaga horjeedeen koox, markii ugu dambeysay oo ay kulammada sare ee horyaalka ay sidaan yeelaan waxay ka horjeedeen Bolton, waana intii u dhaxaysay 1958 illaa 1960.
>- Everton ayaa guuleysatay lix ka mid ah 10-keedii kulan ee ugu dambeeyey horyaalka oo ay garoonkeeda kula ciyaartay Chelsea, afarta kulan ee kale ayaana ku dhammaaday 1 barbaro iyo 3 guuldarro oo ay la kulantay waana in ka badan intii ay sameysay 24-keedii kulan oo markaas ka hor ay garoonkeeda Goodison Park ku wajahday iyaga kulammada sare ee horyaalka, markaasoo ay ka qaateen (5 Guul, 10 Barbaro iyo 9 Guuldarro).
>- Kaddib lix kulan xiriir ah oo ay shabaqooda gool ka ilaashadeen iyagoo ku ciyaarayey garoonka Goodison Park kulammada horyaalka Premier League, Everton ayaa diiwaangeliyay kaliya hal jeer inay shabaqeeda gool ka ilaashatay lixdii kulan ee ugu dambeysay ee ay garoonkooda ku ciyaareen, waxaana laga dhaliyay ugu yaraan labo gool afar ka mid ah kulammadaas.
>- Everton ayaa ciyaari doonta horyaalka Premier League bisha December iyadoo ku jirta booska loogu laabto horyaalka heerka labaad markii ugu horreysay tan iyo bishii December sanadkii 2003, markaasoo ay barbaro 0-0 la galeen Manchester City.
>- Chelsea ayaa dhalisay 19 gool todobadeedii kulan ee ay horyaalka Premier League ku soo ciyaareen meel ka baxsan garoonkeeda xilli ciyaareedkan.
>- Ma jirto koox uu wajahay xiddiga Everton ee Gylfi Sigurdsson oo uu ka dhaliyey goolal badan horyaalka Premier League oo ka badan naadiga Chelsea oo uu ka hortagay taasoo uu ka dhaliyey shan gool.
>- Xiddiga kooxda Chelsea ee Christian Pulisic ayaa gacan ka geystay lix gool shantiisii kulan ee ugu dambeeyey Premier League oo ay martida ahaayeen (Away), waxa uu dhaliyey afar gool, halka labo kalena uu dhiibay ama uu caawiye ka ahaa.